Lapho ikhula Feijoa? Lapho ekhula feijoa eRussia? Indlela yokutshala uphayinaphu ugwava ekhaya
Feijoa - esingavamile kangako kithi izithelo nge ukunambitheka ekhethekile, kodwa kuyanda phakathi abalandeli angavamile. Kodwa lapho feijoa likhula, esimila umndeni ezithakazelisayo Myrtaceae? Naphezu kweqiniso lokuthi kuba impela nezinhlobo eziqinile ezakha angakwazi ukubekezelela nesomiso, namanje ukhetha omnene sezulu nakwezifudumele. Brazil, okuyinto likhula feijoa, - lizwe kusukela olwaqala leminyaka exotic izithelo kulinywe. Futhi igama wanikezwa yokudumisa umfuyi odumile Dzhoani De Silva Feyho.
Lapho feijoa ezikhulayo
Ake sihlolisise ngalesi daba. Lapho ekhula feijoa namuhla, ngaphezu ezweni laso bomdabu? Okokuqala, kubalulekile Paraguay, Uruguay, enyakatho ye-Argentina, emazweni Mediterranean efudumele, lapho olwaqalwa ekuqaleni kwekhulu lama-20. Kamuva ngabo bafunde ngokulawulwa isitshalo e-Asia Ephakathi futhi eCaucasus, isimo sezulu elikuvumela ukuba bahlanganyele ukutshala lolu izithelo enempilo kakhulu. By the way, ekuqaleni ngenxa yobuhle layo eliyingqayizivele ngesikhathi sokuqhakaza otshalwe ngezinhloso Ornamental, zokuhlobisa izindlu zabo futhi umhlaba. izimbali Lilac-red tufted yasekuqaleni bheka amazing kanye umxhwele. It is kuphela ke ukunambitheka ongaziwa izithelo waqala udliwe, kusetshenziswa imithi futhi Cosmetology.
Lapho ekhula feijoa, ogama isithombe ukunika kuvumelana kwetinhlavu ke ngokuvamile kuthathwe izithelo njengoba injalo iluhlaza. Kodwa abantu abaningi baye bafunda ukupheka kuwo zonke izinhlobo sezimoto, izithelo salads iziphuzo okunomsoco, futhi izithelo ezimangalisayo kubanika iphunga olubucayi futhi ukunambitheka ekhethekile.
Kulabo abaye ukuzwa feijoa, lapho ekhula nokudla kwakhe, lokho izakhiwo, okokuqala cha, bakutshele ngezinzuzo izithelo zalo muthi ezishisayo. Ikhaya - Amazing Ukwakheka ocebile okuhlanganisa isibalo esikhulu sezithunjwa cellulose indawo-fibered, uvithamini C, malic acid, sucrose, pectin. Kazi okuqukethwe kwabo ne inchubekelembili kwandisa njengoba izithelo ripens.
Emazweni lapho feijoa ezikhulayo eside ezwa ukuthi ukubunjwa yayo has a Antioxidants eziphila abakhuthele esiyingqayizivele - catechine futhi leucoanthocyanins ukusiza komuntu umzimba ekulweni umdlavuza kanye anti-ukuguga. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi izithelo ikhasi, nakuba kungenzeka ethile yayo emikhulu ngokuthi ukunambitheka astringent kakhulu, ngenxa okuyinto abantu abaningi feijoa ahlanzekile ngaphambi kokusetshenziswa. Futhi ngakho izinzuzo amajikijolo oluhlaza emangalisayo okuningi!
Ukuze lezo zindawo lapho ekhula feijoa, waba godsend kweqiniso njengoba obonwa omangalisayo ukuphulukiswa izithelo. Ikakhulu, i-imithi esemthethweni sinconywa ukusebenzisa izithelo ezivuthiwe for ekwelapheni ukuntula iodine, ukuqina kwemithambo yegazi, kolwelwesi nezinye isisu izifo emathunjini. Uma ufuna nokuvinjelwa evamile umkhuhlane somkhuhlane kanti izifo sibi viral, kuba ngokushesha Feijoa ukusiza ukuqinisa amasosha omzimba zomzimba. Esinye isici esibaluleke kakhulu - ukungabi khona ziyabagulisa simila. Lena kungani cishe wonke umuntu angakwazi ukujabulela ngokuphepha isithelo ewusizo. On the okuhlukile encane, sizoxoxa kamuva.
Feijoa e Cosmetology
Izakhamuzi kulo lonke Russian Federation iyatholakala isimangaliso izithelo. Kulabo ukuthi bukuphi feijoa ikhula eRussia basenza bakutshele ukuthi obukhulu, eziqinile izithelo bright green kubhekwa, phakathi kwezinye izinto, ithuluzi eliyingqayizivele wokugcinwa ubuhle. Phela, core yabo futhi vitamin juice encishisiwe isikhumba turgor, ithoni futhi unciphise isikhumba ukuvuvukala. Feijoa kakhulu ilungisa ukukhubazeka yezimonyo ezifana Rosacea.
Ngilusizo esihlwabusayo izithelo sweet zokupheka yokuhlanza kanye buso okunomsoco evelayo ngasiphi yobudala futhi noma luphi uhlobo isikhumba. Lokhu kwenza kube isitshalo enemisebenzi umkhiqizo wawo uhlobo zemvelo.
Sinikeza iresiphi emangalisayo ikakhulukazi kulabo abafuna rejuvenate isikhumba anti-ukuguga imaski: 2 wezipuni uphayinaphu ugwava uginindela ixubene isipuni samafutha alimondi 1 isipuni ofakwe chamomile benomhluzi oatmeal. Faka isicelo isikhumba ugeze off emva kwemizuzu 20. Uma sisebenzisa lokhu remedy kabili ngesonto, ngemva kwenyanga Kuzoshanelwa nomphumela emangalisa!
Akumangalisi ukuthi feijoa akuyona ingozi njengamabhu kubonakala. Iqiniso elisobala lokuthi izithelo feijoa (lapho likhula, isivele eyaziwa ngalo) anezinye Izimo - ngabanye izingxenye ukungabekezelelani, isifo sikashukela nokukhuluphala ngokweqile. I last amaphuzu amabili kukhona ngenxa yokuqukethwe okusezingeni eliphezulu e amajikijolo ngokushesha ushukela digestible.
Ngakho ukuthi isilinganiso kuyadingeka ngaso sonke. Abalandeli lezi izithelo ezingavamile kufanele ukhumbule ukuthi ngesikhathi isigqugquzeli yegilo umsebenzi akufanele badle kakhulu uphayinaphu ugwava ocebile i-iodine. Zonke ezinye izindaba zika ungakwazi ukujabulisa wena cocktail kanye salads uzilungiselele nalezi amavithamini izithelo, uzengeze nososo yokuqala, kukhona yomusa, njengoba besho, mpilonhle!
Ngokuphathelene ukubaluleka amandla ke 100 amagremu imikhiqizo oluhlaza akhawunti okunama-kilojoule angu-50 kuphela, futhi kuba 3% of kuyinsakavukela nsuku zonke, futhi 26% carbohydrate. Khanyisa yemifino amafutha namaprotheni atholakala ukwabelana alinganayo, kodwa amanzi - 60%. Ngakho-ke eyingqayizivele zazo is a real wezokudla feijoa izithelo.
nososo ewusizo, elimnandi futhi okumnandi ziphelelwe lihambisana inyama noma inhlanzi. By the way, ukudla edliwayo futhi amnandi esinamanzi amacembe izitshalo ukuthi ukukhonza kakhulu kwalokho elungisiwe ukuze izithelo nemifino salads.
feijoa kuphi eRussia ezikhulayo
Kulabo abajwayelene nesihambeli exotic feijoa, okuyinto lukhula eRussia lesi sithelo emangalisayo, futhi edliwayo kunoma yiluphi uhlobo, kuyoba mnandi. Ngo sezulu yethu libuye ezithathwe kahle impande: ku Krasnodar esifundeni, Turkmenistan, Uzbekistan. Kodwa lokhu akulona zonke izindawo. Kukhona futhi namanye ama-republic, lapho ekhula feijoa - e Abkhazia, Georgia futhi Azerbaijan.
Nezimo kwabanye kwezimo ezingajwayelekile, lesi sitshalo uthela izithelo ezweni lakithi elikhulu. elula kakhulu ukuthi izithelo uvuthwe ngo-November, December nango-January, ngoba ngalesi sikhathi asetshenziswa thina ubuyise umzimba nge amavithamini ukuze ukuqinisa amasosha omzimba futhi kuvimbele imikhuhlane.
Ungakwazi ukupheka elimnandi kakhulu nokunomsoco fresh amajikijolo ujamu feijoa, bezihlikihla ngokusebenzisa grater ne ikhasi ushukela ukunambitha. Abalandeli kungathuthukisa a izithelo zohlobo lukalamula ukudla orange, lemon noma lime. Jam isikhathi eside igcinwe endaweni epholile, futhi Abkhazia ezinsukwini hot of ukulungele tonic isiphuzo sakhe cool kuphela buhlanjululwe ngamanzi.
Futhi lapho feijoa ikhula e-Ukraine? Ngo eCrimea (nakuba manje isisezweni Russia) lesi sithelo kuyinto bayindlala kakhulu, hhayi kuphela ngoba umkhiqizo wezokudla, futhi ngaphezu kwakho konke, ngenxa ukuntula iodine amanzi. Peninsula, ngokusho izibalo, kunamandla ngaphezu kwazo nezinye izifunda ku izifo indlala yegilo, ngakho umuthi olusemthethweni uncoma "rasprobovat" isipho ezinesimo sezulu feijoa izithelo, futhi uyifake phakathi ekudleni evamile.
Indlela yokutshala uphayinaphu ugwava ekhaya
isihlahla Miniature Feijoa zingatshalwa ekhaya imbali webhodwe, futhi ngemva kweminyaka emine noma emihlanu, nakanjani ukuthela izithelo. Nakuba izithelo cishe iningi enhle, kodwa lona abangane umbuzo mayelana feijoa "Lapho ikhula le zezinyoni ezingavamile," uphendule ngokuziqhenya: "Nginezwi eliyimfihlo engingathanda ekhaya"
Imbiza kungaba sokhuni, plastic noma sobumba. lokushisa unesitshalo kwanele, kodwa emgwaqeni udinga ukwenza kube ehlobo, sokujabulisa umoya opholile kanye nokuphumula kwelanga okufudumele. Uma imbiza emi phezu efasiteleni ebusika kudingeka siqiniseke ukuthi amaqabunga ungathinti ingilazi, kungenjalo kukhona Kholodov burns. isihlahla Photophilous akufanele ukubeka endaweni emnyama. Ngokuvamile, kuba impela linesizotha.
Indlela ukutshala feijoa
Kungenzeka yini ukutshala feijoa ngokwakho? Lapho ikhula eRussia lesi sithelo emangalisayo? Nanka amanye amathiphu balimi imfundamakhwela. Watshala wona kufanele ukusingatha, uthele imbiza ungqimba wokuqala ubumba zandiswa ke isihlabathi (akukho mkhulu kunokhalo ezintathu amasentimitha), bese primer ekhethekile. Utshalwe kwesihlahla kancane moisturize. Iminyaka yokuqala ngokuvamile branched, kodwa amaqabunga yabo zintekenteke kakhulu. Ukuze ukukhula ohlangothini Kuphendula ngezansi phezulu amahlamvu ezintathu milisa. Okusakazwa izithelo imbewu yemithi kungaba, kusukela ezimpandeni noma cuttings.
Feijoa Imbewu ezathathwa izithelo ezivuthiwe, futhi ngaphambi seeding izinsuku 5 omisiwe. Ngokufanele ukukwenza ekuqaleni ebusika. Inketho engcono - ukuhlwanyela in a ukuxuba ukukhanya Peat moss, amacembe kanye isihlabathi isilinganiso 2/2/1, nakuba okwaziyo futhi evamile ukutshala inhlabathi. Imbewu sijulise isigamu isentimitha le mithi, futhi kwagxilisa phezulu ikhava ifilimu noma ingilazi. Into esemqoka - ukuthambisa avamile. Lapho amahlumela ifilimu sisuswa.
feijoa nakwezifudumele uthanda ukuthambisa njalo okuhle futhi sishaye gqwa, ngaphandle - isikhathi ebusika, lapho akudingi ogelezayo nokumanzisa njalo. Phakathi yokukhula kudingeka ukusuthisa, isibonelo, umquba isibilile, kushintshana ngayo umquba alulaze amaminerali. Khona-ke une ekhaya luyokhula isihlahla oqinile futhi ezinhle othela izithelo ukuzuza impilo yakho. Ebusika ongakwenza ngaphandle koxhumano ezengeziwe ugesi.
Ngakho, noma ubani ofuna ukuba ekhaya ngezandla zabo esekhulile isihlahla asezindaweni ezishisayo izithelo esihlwabusayo Vitamin ungakwenza kalula. A ukubekezela kancane, futhi ngemva kweminyaka emine noma emihlanu, ngiyoba neqholo aphathe abathandekayo babo ewusizo zezithelo kanye nama-dessert kanye uphayinaphu ugwava ejabulela engavamile flavour exotic kanye nemibala egqamile ku ehlathini.
Shelter roses for ubusika Leningrad esifundeni. Inqubo rose yokukhosela ebusika?
Lapho aphonswe Tulips ekwindla?
Indlela ukutshala ama Umlunge kwesokudla?
Imbali aucuba: ukunakekelwa ekhaya. Uyabakhathalela aucuba Japanese
Umlunge: ukunakekelwa futhi kulinywe. Amathiphu wazibonela balimi
Impatiens isitshalo. Ukutshala kanye Ukunakekela
I-puree ye-Baby "I-Gardens Pridonya": ukubuyekezwa, ukubukwa, i-assortment kanye nomkhiqizi
Imenyu lactating omama ngenyanga yokuqala emva kokubeletha
Kuyini idokhumenti ngogesi?
Acute isimiso emathunjini: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Senhliziyo tamponade: Izimbangela Nezingozi Izibikezelo
Sdyuzhil - lena Inani ukusetshenziswa yokukhuluma
IWundlu isobho. Indishi kuqala etafuleni lakho
Isiphetho, isichibiyelo kanye nokumiswa inkontileka